'कोरियाको अन्त्य लिबियाको जस्तो' भन्ने अमेरिकी भनाइप्रति कोरियाको आपत्ति
२०७५ जेठ १० बिहिबार, सोल । अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले उत्तर कोरियाको अन्त्य लिबियाकोजस्तो हुन पनि सक्ने भनी गरेको टिप्पणीप्रति उत्तर कोरियाले कडा आपत्ति जनाएको छ । उत्तर कोरियाली उपविदेशमन्त्री चो सुन हुइले उक्त भनाइप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । अमेरिकी उपराष्ट्रपतिको भनाई अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । ... बाँकी अंश»
पाँच लाख २३ हजार डलरमा बिक्यो कार्ल मार्क्सको एक पाना
२०७५ जेठ १० बिहिबार, काठमाडौं । सम्यवादका पिता मानिने कार्ल मार्क्सको एक पाण्डुलिपीको ह स्तलिखित पेज पाँच लाख २३ हजार अमेरिकी डलरमा लिलाम भएको छ । अहिले लिलाम भएको पेज उनको प्रसिद्ध किताब ‘द क्यापिटल’ को एक हिस्सा रहेको बताइँदै आएको छ । सञ्चारमाध्यमहरुले बताएअनुसार यो पाना सन् १८५० को सेप्टेम्बरदेखि १८५३ को अगष्टको बीचमा लेखिएको माक्र्सको १२५० पानाको टिप्पणीको एक हिस्सा हो । यसको आधारमा उनले ‘द क्यापिटल’ नामको पुस्तक लेखेका थिए । ... बाँकी अंश»
चीनमा अत्यधिक मात्रामा आवाज प्रदूषण, अमेरिकाद्धारा आफ्ना कर्मचारीलाई सतर्क
२०७५ जेठ १० बिहिबार, काठमाडौं । अमेरिकाले चीनमा रहेका आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आवाजको प्रदूषणबाट बच्नका लागि सचेत गराएको छ । अमेरिकी कर्मचारीहरुमा आवाज प्रदूषणको कारण अनौठो संकेतहरु देखिएसँगै अमेरिकाले यस्तो अलर्ट जारी गरेको हो । ... बाँकी अंश»
निपा भाइरसले भारतलाई सताउँदै, पाँच राज्यमा अलर्ट जारी
२०७५ जेठ १० बिहिबार, काठमाडौं । भारतमा निपा भाइरसले जनजीवनलाई प्रभावित पार्दै गएको छ । चार राज्यमा सावधानी अपनाउन अलर्ट जारी गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
कसैको ट्वीटर ब्लक गर्न ट्रम्पलाई रोक
२०७५ जेठ १० बिहिबार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीटरका भोका छन् । उनी हरेक सूचना ट्वीटरमा दिने गर्छन् । उनै ट्रम्पले आफूलाई मन नपर्ने ट्वीटर ब्लक पनि गर्न चाहन्थे होला । ... बाँकी अंश»
के २०१६ हालसम्मकै त्राषदीको वर्ष थियो ?
२०७५ जेठ ९ बुधबार, नयाँ दिल्ली । सरसरती हेर्ने हो भने सन् २०१६ एउटा त्राषदीको वर्ष थियो । भयानक आतङ्कवादी हमलाले धेरै देश आक्रान्त भए । सिरियाली सङ्कटले दशौं हजारको ज्यान लियो भने टर्कीले पनि आत्मघाती बम हमला र एउटा असफल सत्ता विद्रोह खेप्नुपर्यो । ... बाँकी अंश»
उत्तर कोरियासँगको शिखर बैठक पर सर्न सक्छ : ट्रम्प
२०७५ जेठ ९ बुधबार, वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच आगामी जुन महिनाको १२ तारिखमा हुने भनिएको शिखर बैठक उक्त समयमै नहुन पनि सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जानकारी दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
हच्कियो अमेरिकाः उत्तर कोरियासंगको वार्ता ढिला हुन सक्ने ट्रम्पको प्रतिक्रिया
२०७५ जेठ ९ बुधबार, काठमाडौं । उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच जुन १२ तारिखमा हुने भनिएको शिखर वार्तामा ढिलाइ हुने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनसँगको ऐतिहासिक शिखर वार्तामा केही ढिलाई हुनसक्ने बताए । ... बाँकी अंश»
सुरक्षाकर्मीको गोली लागि नौ जनाको मृत्यु, २० घाइते
२०७५ जेठ ९ बुधबार, नयाँ दिल्ली । भारतको दक्षिणी राज्य तामिलनाडुमा तामा खानी बन्द गर्न भन्दै विगत तीन महिनादेखि जारी आन्दोलनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागि कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएका र अन्य २० जना घाइते भएका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
किन चिनफिङमा निर्भर छ ट्रम्प–किम बैठकको सफलता ?
२०७५ जेठ ८ मंगलबार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोन उनको बीचमा आगामी महिनामा परमाणु युद्ध रोक्नको लागि एक सम्झौतामा पुग्ने लक्ष्यका साथमा बैठक हुन गइरहेको छ । यद्यपि यो बैठक यी दुई नेताहरुमा मात्र निर्भर भने छैन । यो मामिलामा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको पनि ठुलो हात रहनसक्ने देखिएको छ । ... बाँकी अंश»
दक्षिण कोरिया भन्छ, उत्तर कोरियासँग ९९.९ प्रतिशत आशावादी छौँ
२०७५ जेठ ८ मंगलबार, सोल। दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियासँग वार्ताको सम्भावना ९९.९ प्रतिशतसम्म रहेको बताएको छ। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय इनका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार चुङ इयु योङले भने– हामी उत्तर कोरियाप्रति आशावादी छौँ, हामीलाई लाग्छ आगामी उच्च सम्मेलनको लागि हामी ९९.९ प्रतिशत आशावादी रहेका छौँ। ... बाँकी अंश»
अमेरिकाद्वारा इरानमा कडा प्रतिबन्धको घोषणा, इरानको कडा आपत्ति
२०७५ जेठ ८ मंगलबार, वासिङ्टन। अमेरिकाले इरानमाथि पुराना प्रतिबन्धहरु पुनः दोहार्‍याउने भएको छ। इरानमाथि अमेरिकाले सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौतापछि ती प्रतिबन्धहरु फुकुवा गरेको थियो। तर हालै अमेरिकाले इरानसँगको उक्त पारमाणविक सम्झौता रद्द गरेको छ। त्यसपछि भने अमेरिकाले ती पुराना प्रतिबन्धहरु पुनः लगाउने भएको बताइएको हो। ... बाँकी अंश»
भेनेजुयलाबाट फिर्ता बोलाइए १४ देशका राजदूतहरु, कारण यस्तो
२०७५ जेठ ८ मंगलबार, काठमाडौं । भेनेजुयलामा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रपति निकोलास मादुरोले पुनः जित हासिल गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय रुष्ट बनेका छन् । विपक्षी पार्टीलार्य निर्वाचनमा आउनको लागि रोक लगाएर निर्वाचनमा जित हासिल गरेको भन्दै मादुरोको आलोचना भएको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ ७ सोमबार, सोल। उत्तर र दक्षिण कोरियाका उच्चस्तरीय अधिकारीको बैठक अझै बस्न सकेको छैन। गएको बुधबार बस्ने भनिएको सो बैठक हप्तादिनसम्म पनि बस्न नसकेको बताइएको छ। दक्षिण कोरियाको सोलमा जारी रहेको सैन्य अभ्यासका कारण उत्तर कोरियाले एकतर्फीरुपमा उक्त बैठक स्थगित गरेको थियो। ... बाँकी अंश»
रुवाण्डामा चट्याङ लागेर १२ को मृत्यु
२०७५ जेठ ७ सोमबार, किगाली, रुवाण्डा ।रुवाण्डाको किगाली भन्ने स्थानमा चट्याङ लागेर शनिबार र आइतबारमात्र १२ जना किसानको मृत्यु भएको समाचारमा छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ ७ सोमबार, सोल । उत्तर र दक्षिण कोरियाका उच्चस्तरीय अधिकारीको बैठक अझै बस्न सकेको छैन । गएको बुधबार बस्ने भनिएको सो बैठक हप्तादिनसम्म पनि बस्न नसकेको बताइएको छ । दक्षिण कोरियाको सोलमा जारी रहेको सैन्य अभ्यासका कारण उत्तर कोरियाले एकतर्फीरुपमा उक्त बैठक स्थगित गरेको थियो । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ ७ सोमबार, काठमाडौं । भारतको केरलामा प्राणघातक ‘निपा’ भाइरस फेला परेको छ । सरकारको स्वास्थ्य टोलीले यो भाइरसको पुष्टि गरेका हुन् । कतै कतै मात्र पाइने यो भाइरसको कारण भारतमा अहिलेसम्म पाँच जनाको ज्यान गइसकेको छ भने नौ जना मानिसहरु गम्भीर अवस्थामा रहेका छन् । ... बाँकी अंश»
निर्वाचन काण्डले ट्रम्पलाई पछ्याउन नछाडेपछि, थप अनुसन्धान
२०७५ जेठ ७ सोमबार, काठमाडौं । अमेरिकाको न्यय विभागले अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा गलत तरिकाले मानिसहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अभियान चलिाएको विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ । ... बाँकी अंश»
रुसी खराब मुद्रामा बेलायतको आँखा, पुटिनको भ्रष्ट सम्पत्ति लुकाउन तल्लीन
२०७५ जेठ ७ सोमबार, काठमाडौं । अधिकारीहरुले बेलायत अहिले रसियाको खराब मुद्रामा अन्धो भएर लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिम रहेको रसियाको मुद्रालाई बेलायतले प्रयोग गर्नु गलत रहेको उनीहरुले बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
नक्सलवादी समूहको विष्फोटनमा परी ७ भारतीय प्रहरीको मृत्यु
२०७५ जेठ ७ सोमबार, राइपुर । छत्तिसगढ सशस्त्र बल तथा जिल्ला प्रहरी बलको एक गस्ती समूहलाई लक्षित गरी विछ्याइएको शक्तिशाली वम विष्फोट गराइँदा आइतबार दन्तेवडा जिल्लामा कम्तीमा ७ जना प्रहरीको निधन भएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»